URumah Nizar - Indlu yonke (ekufuphi neNgarai Sianok) - I-Airbnb
URumah Nizar - Indlu yonke (ekufuphi neNgarai Sianok)
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguDanang Aditya
Le yindlu endala eyenziwe ngamaplanga eyakhiwa emva phaya ngo-1930 kwaye sele idluliselwe kwizizukulwana ezine. Indlu ibekwe kumbindi weBukittinggi kwisitalato iPanorama, ihamba ngemizuzu emi-5 kuphela ukuya eNgarai Sianok kunye nemizuzu eyi-10 ukuya kwiJam Gadang edumileyo. Yonwabela ilizwe uziva ngezithethe zeMinang kunye nobumelwane, ngelixa ukufutshane ngokwaneleyo kwiindawo ezinomtsalane zasekhaya, iivenkile zokupheka kunye nezikhumbuzo. Sithetha isi-Bahasa Indonesia, isiNgesi kunye nesiJapan.
Undwendwe lunokufikelela kwigumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo, igumbi lokuhlala, igumbi lokutyela, ikhitshi kunye negadi.
Indlu isembindini weBukittinggi. Umtsalane odumileyo onje ngeJam Gadang kunye neNgarai Sianok yimizuzu nje embalwa kude nendlu, onokuthi uyindwendwele kusasa ukonwabela imbonakalo entle yokuphuma kwelanga. Iindawo zokutyela zasekhaya zinokufumaneka ebumelwaneni, kwaye kufuneka uzame isitya phakathi kwabaninzi nguNasi Kapau kunye noLamang Tapai. Iikhefi, iivenkile zezikhumbuzo kunye neevenkile eziluncedo zikumgama nje ambalwa ukusuka endlwini.
UDanang noSessy abahlali kule ndawo kodwa isizalwane sethu sihlala (Uni Neli). Unokufikelelwa ngokulula nangaliphi na ixesha losuku. Noko ke, uDanang noSessy banokuqhagamshelwana nabo ngemiyalezo yakwa-Airbnb, ngoko bazise xa kukho nantoni na oyifunayo.
UDanang noSessy abahlali kule ndawo kodwa isizalwane sethu sihlala (Uni Neli). Unokufikelelwa ngokulula nangaliphi na ixesha losuku. Noko ke, uDanang noSessy banokuqhagamshelwana n…